Trintellix vs. Lexapro: ny tsy fitoviana, ny fitoviana ary iza no tsara kokoa aminao - Zava-Mahadomelina Vs. Namana | Desambra 2021
Orinasa, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Orinasa, Vaovao Orinasa, Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Biby Fiompy Fahasalamana Fanatanjahan-Tena Mavesatra Fanabeazana Ara-Pahasalamana Community, Company Fiaraha-Monina, Fahasalamana Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Vaovao, Wellness Wellness Ny Fizahana Mpanao Gazety Lalao
Tena >> Zava-Mahadomelina Vs. Namana >> Trintellix vs. Lexapro: ny tsy fitoviana, ny fitoviana ary iza no tsara kokoa aminao
Trintellix vs. Lexapro: ny tsy fitoviana, ny fitoviana ary iza no tsara kokoa aminao
Olona amerikana maherin'ny 16 tapitrisa no manana ketraka (aretin-tsaina lehibe), ary olon-dehibe efa ho 7 tapitrisa no voan'ny aretina mitebiteby amin'ny ankapobeny. Tranga farany niseho toy ny areti-mandringana COVID-19, dia a loharanon'ny fitaintainanana ho an'ny olona maro.
Trintellix (vortioxetine) sy Lexapro (escitalopram) dia fanafody roa ampiasaina amin'ny famoifoizana. Lexapro koa ampiasaina amin'ny fitaintainanana. Ireo fanafody roa ireo dia nankatoavin'ny United States Food and Drug Administration (FDA).
Trintellix sy Lexapro dia ampahany amin'ny vondrona fanafody antsoina hoe SSRI (mpanakana ny serotonine reuptake). Ny SSRI dia miasa amin'ny fampitomboana ny haavon'ny serotonin ao amin'ny ati-doha, izay manampy amin'ny fanatsarana ny soritr'aretin'ny fahaketrahana. Na dia samy SSRI aza i Trintellix sy Lexapro dia manana fahasamihafana vitsivitsy izy ireo, izay horesahinay etsy ambany.
Inona avy ireo fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny Trintellix sy Lexapro?
Trintellix (vortioxetine) dia fanafody SSRI. Tsy misy amin'ny anaran'ny marika fotsiny izy io, amin'ny endrika takelaka. Azo ampiasaina amin'ny olon-dehibe ihany izy io. Mbola tsy nianarana tamin'ny ankizy io. Trintellix dia nantsoina taloha hoe Brintellix, fa ny novana ny anarana hialana amin'ny fisafotofotoana amin'ny fanafody antiplatelet antsoina hoe Brilinta.
Lexapro (escitalopram) dia SSRI. Lexapro dia misy amin'ny endrika marika sy mahazatra ary amin'ny takelaka na vahaolana am-bava. Lexapro dia ampiasaina amin'ny olon-dehibe sy tanora 12 taona no ho miakatra noho ny fahaketrahana, na olon-dehibe 18 taona no ho miakatra noho ny fanahiana.
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny Trintellix sy Lexapro
Kilasy zava-mahadomelina SSRI (mpanakana ny serotonin-tsolika voafantina) SSRI (mpanakana ny serotonin-tsolika voafantina)
Brand / status generic Marika Brand sy generic
Iza no anarana mahazatra? Vortioxetine Escitalopram
Inona avy ireo endrika miditra amin'ny zava-mahadomelina? Takelaka Tablet, vahaolana
Inona ny fatra mahazatra? Atombohy amin'ny 10 mg isan'andro dia mitombo hatramin'ny 20 mg isan'andro raha mahazaka 5 mg, 10 mg, na 20 mg indray mandeha isan'andro
Iza matetika no mampiasa ny fanafody? olon-dehibe Ny lehibe sy ny tanora (12 taona no ho miakatra)
Te hanana ny vidiny tsara indrindra amin'ny Trintellix?
Misorata anarana amin'ny fampandrenesana ny vidin'ny Trintellix ary fantaro rehefa miova ny vidiny!
Toe-javatra tsaboin'i Trintellix sy Lexapro
Trintellix dia aseho amin'ny fitsaboana aretina miteraka fahaketrahana (MDD). Indraindray izy io no ampiasaina marika tsy fantatra ho an'ny aretin-tebiteby amin'ny ankapobeny.
Lexapro dia aseho amin'ny fitsaboana MDD amin'ny olon-dehibe sy tanora 12-17 taona. Ny Lexapro dia aseho ihany koa amin'ny fitsaboana aretina mitebiteby amin'ny olon-dehibe.
toe-javatra Trintellix Lexapro
Aretim-po lehibe (MDD) ENY ENY
Aretin-tebiteby ankapobeny Label tsy misy ENY
Mahomby kokoa ve i Trintellix na Lexapro?
ny fanadihadiana-meta (famakafakana fanadihadiana maro) navoaka tamin'ny taona 2018 dia nanombatombana antidepressants 21. Samy Trintellix sy Lexapro dia hita fa mahomby kokoa noho ny antidepressants hafa. Samy nandefitra tsara kokoa izy ireo noho ny antidepressants hafa koa.
ny fianarana nataon'ny mpanamboatra Trintellix dia namintina fa ny Trintellix sy Lexapro dia samy antidepressants mandaitra. Ny fanadihadiana dia nitatitra ihany koa fa ny Trintellix dia nanana fihenan-tsasatra ambony kokoa noho ny Lexapro.
Ny mpitsabo anao dia afaka mamaritra ny fanafody mahomby indrindra ho anao, amin'ny fiheverana ny toe-pahasalamanao sy ny tantaranao ary koa ireo fanafody raisinao izay afaka mifanerasera amin'i Trintellix na Lexapro.
Te hanana ny vidiny tsara indrindra amin'ny Lexapro?
Misorata anarana amin'ny fampandrenesana ny vidin'ny Lexapro ary fantaro rehefa miova ny vidiny!
Fampitahana sy fampitahana ny vidin'ny Trintellix vs. Lexapro
Trintellix dia rakotry ny fiantohana sy drafitra Medicare Fizarana D. Na izany aza, tsara kokoa ny mijery miaraka amin'ny drafitrao raha mila antsipiriany momba ny fandrakofana manokana. Trintellix tsy misy afa-tsy amin'ny anarana marika. Mety lafo mihoatra ny $ 500 ny takelaka # 30, 20 mg. Azonao atao ny mampiasa coupon SingleCare maimaim-poana hampihenana ny vidiny eo amin'ny $ 350.
Lexapro mazàna dia saron'ny fiantohana sy Medicare Fizarana D. Ny kinova generika mazàna dia manana copay ambany kokoa. Matetika ny vokatra marika dia matetika manana copay ambony kokoa na mety tsy ho voasarona mihitsy. Generic Lexapro dia mitentina $ 70 ho an'ny takelaka generika # 30, 10 mg. Ny karatra SingleCare dia afaka mampihena ny vidin'ny generic hatramin'ny $ 8.
Voasaron'ny fiantohana mahazatra? ENY Eny (generika)
Voasaron'ny Medicare Fizarana D? ENY Eny (generika)
Fatra mahazatra Takelaka 30, 20 mg Takelaka 30, 10 mg
Copie Medicare mahazatra $ 3- $ 14 $ 0- $ 30
Sarany SingleCare $ 352- $ 365 $ 8- $ 40
Raiso ny karatra fihenam-bidy parmasia
Ny voka-dratsin'ny Trintellix vs. Lexapro
Ny voka-dratsin'ny Trintellix izay mahazatra indrindra dia ny maloiloy, izay mazàna somary malefaka ary maharitra tapa-bolana. Ny tranga ratsy hafa mahazatra dia misy ny voka-dratsy eo amin'ny lahy sy ny vavy, maloiloy, fitohanana, mandoa, mivalana, vava maina ary fanina.
Ny voka-dratsy ateraky ny Lexapro dia ny aretin'andoha, maloiloy, olana ara-pananahana, fahamamoana ary tsy fahitan-tory.
Isaky ny famandrihana vaovao na refill an'ny Trintellix na Lexapro dia hahazo torolàlana momba ny fanafody ianao izay miresaka momba ny voka-dratsy, fampitandremana ary fampahalalana manan-danja hafa.
Tsy lisitra feno ny vokatra hafa io. Ny voka-dratsy hafa dia mety hitranga. Miresaha amin'ny mpitsabo anao raha mila lisitr'ireo vokatra hafa mety hitranga.
Aretin'an-doha ENY % tsy notaterina ENY 24%
maloiloy ENY 21-32% ENY 18%
Fikorontanana / fiterahana ara-nofo ENY 16-34% ENY 14%
aretim-pivalanana ENY 7-10% ENY 8%
fitohanana ENY 3-6% ENY 3%
Vava maina ENY 6-8% ENY 9%
rendremana tsy - ENY 13%
fanina ENY 6-9% ENY 5%
mahita tory tsy - ENY 12%
* miankina amin'ny fatra ny vokany
Loharano: DailyMed ( Trintellix ), DailyMed ( Lexapro )
Fifandraisana zava-mahadomelina an'ny Trintellix vs. Lexapro
Satria samy ao anaty sokajy iray ny fanafody roa, dia mitovy ny fifandraisan'ny zava-mahadomelina.
MAOI (monoamine oxidase inhibitors) mifanerasera amin'ny Trintellix sy Lexapro. Ny fampiasana azy ireo dia tsy maintsy sarahina 14-21 andro, miankina amin'ny drafitra fitsaboana tsirairay. Ny fampifangaroana MAOI amin'ny Trintellix na Lexapro dia mety hampitombo ny risika serotonin syndrome , vonjy taitra ara-pitsaboana mandrahona ny ainy noho ny fananganana serotonin.
Ny Triptans dia nampiasaina tamin'ny fitsaboana migraines, toy ny Imitrex (sumatriptan), ary ny antidepressants hafa, toy ny Elavil na Cymbalta, dia tsy tokony hampiasaina miaraka amin'ny Trintellix na Lexapro noho ny atin'ny serotonin syndrome. Ary koa, ny dextromethorphan mpanindry ny kohaka - izay hita ao amin'ny Robitussin-DM ary koa ireo kohaka sy vokatra mangatsiaka maro hafa - dia tokony hialana satria mety hiteraka ny serotonin syndrome koa raha ampiarahina amin'ny Trintellix na Lexapro.
Ny fanafody hafa izay mety hifaneraserana amin'ny Trintellix na Lexapro dia misy fanafody anti-steroidal anti-inflammation (NSAIDs), toy ny aspirin na ibuprofen, ary anticoagulants (manify ra), toy ny warfarin. Sorohy ny alikaola rehefa mandray Trintellix na Lexapro.
RONGONY Kilasy zava-mahadomelina Trintellix Lexapro
Tranylcypromine MAOI ENY ENY
toaka toaka ENY ENY
Zolmitriptan Triptans ENY ENY
St. John's Wort fanampin ENY ENY
Warfarin Anticoagulant ENY ENY
Dextromethorphan (amin'ny kohaka sy vokatra mangatsiaka maro) Suppressant kohaka ENY ENY
Erythromycine Antibiotika Macrolide tsy ENY
Naproxen NSAIDs ENY ENY
Venlafaxine Antidepressants SNRI ENY ENY
Nortriptyline Antidepressants Tricyclic ENY ENY
Diazepam Benzodiazepines tsy ENY
Fampitandremana avy amin'ny Trintellix sy Lexapro
Ny SSRI rehetra, ao anatin'izany ny Trintellix sy Lexapro, dia manana fampitandremana amin'ny famonoan-tena. Ny ankizy, ny tanora ary ny olon-dehibe tanora (hatramin'ny 24 taona) izay mihinana fanafody antidepressant dia manana risika bebe kokoa amin'ny eritreritra sy fihetsika mamono tena. Mandeha ny marary rehetra fanafody antidepressant tokony harahi-maso tsara.
Ny serotonin Syndrome dia vonjy taitra lehibe, atahorana ho faty vokatry ny fananganana serotonin be loatra. Ireo marary izay mandray Trintellix na Lexapro dia tokony harahi-maso tsara mba hahitana famantarana sy soritr'aretin'ny serotonin syndrome toy ny hallucination, ny fanintona, ny fiovan'ny tosi-dra, ary ny fikorontanana. Ny marary dia tokony hitady fitsaboana maika raha sendra misy ireo fambara ireo. Ireo marary izay mihinana zava-mahadomelina hafa izay mampitombo ny haavon'ny serotonin (triptans, antidepressants tricyclic, fentanyl, lithium, tramadol, tryptophan, buspirone, dextromethorphan, amphetamines, St. John's Wort, ary MAOIs) dia ahiana ho voan'ny serotonin syndrome.
Ny SSRI dia mety hampitombo ny risika amin'ny rà. Mitombo ny risika amin'ny fampiasana aspirinina, NSAID, na warfarin.
Ny fihenan'ny mania na hypomania dia mety hitranga. Amin'ny marary manana aretina bipolar, ny antidepressant dia mety hiteraka fizarana mifangaro / manic.
Sorohy ny SSRI na ampiasao am-pitandremana amin'ireo marary manana zoro tery anatomika tsy voatsabo (glaucoma fanidiana fehizoro). Trintellix sy Lexapro dia mety hiteraka olana amin'ny fahitana toy ny fanaintainan'ny maso, ny fiovan'ny fahitana, ny mena ary ny fivontosana. Anontanio ny mpiasan'ny fahasalamanao raha tandindomin-doza ianao.
Ny hyponatremia (haavon'ny sodium ambany) noho ny soritr'aretin'ny hormonina antidiuretic (SIADH) dia mety hitranga. Ny marary dia mety hahatsapa aretin'andoha, sarotra ny mifantoka, tsy fahatomombanan'ny fahatsiarovana, fisafotofotoana, fahalemena ary tsy fahatokisan-tena, izay mety hitarika fianjerana. Tranga misimisy kokoa mety hitranga. Ny marary dia tokony hitady fitsaboana maika raha sendra soritr'aretina ary ajanona ny SSRI.
Rehefa mitsahatra ny Lexapro dia mety hitranga ny fisintomana toy ny fikorontanana. Ny marary dia tokony hikororosy miadana amin'ny zava-mahadomelina ary tsy hijanona tampoka.
Ny Trintellix dia azo tapahina tampoka raha ilaina izany, fa ny mpanamboatra kosa dia manome soso-kevitra fisintomana fohy hisorohana ny soritr'aretina toy ny aretin'andoha sy ny fihenjanana amin'ny hozatra. Ny mpitsabo anao dia afaka manoro hevitra anao ny amin'ny fomba tsara indrindra hampijanonana ny Trintellix na Lexapro.
Aza mitondra fiara na miasa milina mandra-pahafantatrao ny fiantraikan'ny Trintellix na Lexapro aminao.
Miresaha amin'ny mpitsabo anao momba ny fampiasana Trintellix na Lexapro raha manana tantaram-panintonana ianao.
Amin'ny tranga tsy fahita firy, dia efa nisy ny tatitra momba ny fiota tampoka sy ny fihenan'ny alika / rafitra anaaphylaxis izay nahafaty. Raha sendra soritr'aretina maika na mahazaka aretina ianao, ajanony ny fitsaboana Trintellix na Lexapro ary mitadiava fitsaboana avy hatrany.
Lexapro dia mety hiteraka fanitarana QT sy arrhythmia ventricular. Ny marary sasany dia atahorana kokoa noho ny toe-pahasalamana na fanafody hafa. Anontanio ny mpitsabo anao raha azo antoka ho anao i Lexapro.
Mampiasà Lexapro am-pitandremana amin'ireo marary manana olana amin'ny voa.
Trintellix na Lexapro dia tokony hampiasaina amin'ny fitondrana vohoka raha toa ka lehibe kokoa noho ny loza ateraky ny zaza ny tombony ho an'ny reny. Ny fijanonana ny fanafody dia mety hiteraka famerenan'ny fahaketrahana na fitaintainanana. Noho izany, ny marary dia tokony hodinihina isaky ny tranga. Ny mpitsabo anao dia afaka mandanjalanja ny loza ateraky ny tombony amin'ny fampiasana SSRI mandritra ny fitondrana vohoka. Ny neonates voan'ny SSRI amin'ny trimester fahatelo dia namorona fahasarotana mitaky fampidirana hopitaly lava, fanampiana ara-pisefoana ary famahanana fantsona. Raha efa ao amin'ny Trintellix na Lexapro ianao ary mahita fa bevohoka ianao dia mifandraisa avy hatrany amin'ny mpitsabo anao.
Fanontaniana napetraka matetika momba ny Trintellix vs. Lexapro
Inona no atao hoe Trintellix?
Trintellix dia SSRI, na mpanakana serotonin reuptake. Hita amin'ny endrika marika izy io ary ampiasaina amin'ny fitsaboana ny fahaketrahana amin'ny olon-dehibe.
Inona no atao hoe Lexapro?
Lexapro dia SSRI. Lexapro dia afaka mitsabo ny hakiviana sy ny fitaintainanana. Hita amin'ny endrika marika sy generika (escitalopram) izy io.
Trintellix sy Lexapro ve mitovy?
Trintellix sy Lexapro dia samy ao amin'ny sokajy fanafody fanafody SSRI. Mitovy izy ireo, saingy tsy mitovy. Manana fahasamihafana vitsivitsy izy ireo, araka ny voalaza etsy ambony. Ny zava-mahadomelina SSRI hafa mety efa henonao dia ny Celexa (citalopram), Luvox (fluvoxamine), Paxil (paroxetine), Prozac (fluoxetine), ary Zoloft (sertraline).
Ny sokajy fanafody iray hafa izay mety efa henonao dia ny sokajy fanafody SNRI, izay misy Cymbalta (duloxetine), Effexor (venlafaxine), ary Pristiq (desvenlafaxine).
Trintellix sa Lexapro tsara kokoa?
Jereo ny fizarana etsy ambony momba ny fahombiazana-misy kely dia kely ny data mampitaha an'i Trintellix sy Lexapro mivantana. Ny fandinihana dia mampiseho fa ny fanafody roa dia mahomby ary mandefitra toy izany koa, na dia samy manana ny vokany izay mety hanelingelina ny olona sasany aza ny fanafody roa, toy ny maloiloy na ny voka-dratsin'ny firaisana.
Ny mpitsabo anao dia afaka mamaritra izay fanafody tsara kokoa ho anao, amin'ny fiheverana ireo toe-javatra tsy manam-paharoa aminao. Ohatra, raha ny vidiny no mamaritra, ny generic Lexapro dia mety ho mora vidy kokoa, ary mety hanaraka ny fomba fanao ianao. Na, raha manahirana ny voka-dratsy eo amin'ny lahy sy ny vavy dia mety hanao tsara kokoa ianao amin'ny Trintellix, izay mety tsy dia misy vokany ratsy eo amin'ny lahy sy ny vavy.
Afaka mampiasa Trintellix na Lexapro ve aho mandritra ny fitondrana vohoka?
Manantona ny mpitsabonao ho an'ny torohevitra. Izy dia handanja ny tombony azo avy amin'ny fitsaboana antidepressant mifanohitra amin'ny loza ateraky ny zaza. Neonates iharan'ny antidepressants sasany, ao anatin'izany ny SSRI, ao amin'ny telovolana fahatelo amin'ny fitondrana vohoka, dia niteraka aretina.
Raha efa ao amin'ny Trintellix na Lexapro ianao ary mahita fa bevohoka ianao dia manatona ny OB-GYN anao avy hatrany hahazoana torohevitra. Raha toa ianao ka fampinonoana , jereo ihany koa ny OB-GYN-nao.
Azoko atao ve ny mampiasa Trintellix na Lexapro amin'ny alikaola?
Tsia. Trintellix na Lexapro dia tsy tokony alika amin'ny alikaola satria ny fitambarana dia mety hampitombo ny risika amin'ny famoizam-po (mihena ny fifohana rivotra, tsy mahazo oksizena ampy) ary mampitombo ny fitoniana sy ny fahamendrehana ary manimba ny fahamailoana. Ny fitambarana koa dia mety hampitombo ny ahiahy sy ny fahaketrahana.
Ahoana no tsy itovizan'ny Trintellix amin'ny antidepressants hafa?
Trintellix dia miasa ho toy ny antagonista, agonista ary agonista ampahany amin'ny mpandray serotoninina maro hanampiana soritr'aretin'ny fahaketrahana. Ny fanafody hafa ao amin'ny kilasy SSRI, toa an'i Lexapro, dia miasa amin'ny fampitomboana ny fiasan'ny serotonin ao amin'ny rafi-pitabatabana afovoany.
Moa ve ny Trintellix miteraka fitomboan'ny lanja?
pitsaboana fampianarana nampiseho fa ny Trintellix tsy misy fiatraikany lanja. Tsy misy fahasamihafana amin'ny fiovan'ny lanjan'ny olona izay nitondra Trintellix sy ireo olona naka placebo (pilina tsy miasa). Ny angon-drakitra taorian'ny marketing dia miresaka momba ny fiakaram-bidy fa tsy milaza ny isan-jaton'ny olona niaina fitomboana. Miresaha amin'ny mpitsabo anao raha manahirana ny fitomboan'ny lanjany.
Inona no atao hoe fiantohana vola?
Advil isaky ny afaka mandray azy io ianao
fomba haingana hanesorana ny fitohanana
haavon'ny siramamy ao anaty alohan'ny sakafo sy aorian'ny fihinana
inona ny anarana mahazatra an'ny atenolol
inona ny karazana ra ilaina indrindra?
ny fomba fanesorana ny mainty ambanin'ny toenail